उत्प्रेरक परिवर्तन: एन्टोनियो कहानी
Samhita Collur मा मे 28, 2019 द्वारा लिखित।
उत्प्रेरक मियामी MAF को राष्ट्रीय सदस्य हो Lending Circles नेटवर्क फ्लोरिडाको मियामी-डडे काउन्टीमा आधारित। यसको विविध कार्यक्रमहरू र सेवाहरू मार्फत, उत्प्रेरक मियामी गरिबी विरुद्ध लड्न र मियामी समुदायमा स्वास्थ्य, शिक्षा, र आर्थिक अवसर सुधार गर्न समर्पित छ। उत्प्रेरक मियामी २०१ official मा एक आधिकारिक १TP4T प्रदाता बन्नुभयो, उनीहरूको कार्यक्रम र सामाजिक सेवाहरूको क्रेडिट-निर्माण थपेर।
आजको मिति, क्याटलिस्ट मियामीले उपलब्ध गराएको छ सहभागीहरु लाई TPण मा $350,000 भन्दा बढी। तिनीहरूले कुशलतापूर्वक Lending Circles लाई उनीहरूका अन्य प्रोग्रामहरूमा समाहित गरेका छन जसले गर्दा संगठनसँग पहिले नै संलग्न ग्राहकहरूले सजिलै उनीहरूको क्रेडिट बनाउनको लागि मूर्त, प्रमाणित अवसरमा पहुँच गर्न सक्दछन्। उनीहरूले आफ्ना धेरै सहभागीलाई स्थानीय सामुदायिक कलेज र ट्याक्सीमा संलग्न गरेर भर्ती गरेका छन्। तिनीहरू विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको debtण कम गर्न र वित्तीय स्वास्थ्य र समृद्धिको भविष्यको लागि सेटअप गर्न संसाधनहरू प्रदान गर्न चाहन्छन्।
२०१ September को सेप्टेम्बरमा, एन्टोनियो एक वित्तीय कोचको साथ नियुक्तिको लागि उत्प्रेरक मियामी आए। उनी आफ्नो क्रेडिट इतिहासमा देखा परेका केहि चीजहरूको बारेमा चिन्तित थिए, र उनी सल्लाह लिन चाहन्थे।
यद्यपि तिनीहरू एन्टोनियो क्याटालिस्ट मियामी आइपुगेको बेलामा उनको दिमागमा पुगेका थिएनन्, उनले वित्तीय कोचसँग सेवन गर्ने प्रक्रियाको क्रममा केही अन्य चिन्ताको विषय पनि समाप्त गरे: उनी र उनको श्रीमतीले भर्खरै छुट्टिए, र एन्टोनियो चिन्तित थिए कि कसरी अलग हुँदा उसको कान्छो बच्चा प्रभावित हुन्छ। उनले यो पनि साझा गरे कि उनी पहिले कैदमा थिए।
एन्टोनियो आफ्नो creditण मर्मत गर्न मद्दत चाहान्थे र थप आर्थिक स्थिर हुने योजना बनाउँथे।
एन्टोनियोसँग सधैं नै कडा कार्यको नैतिकता रहेको छ। जब उनी क्याटलिस्ट मियामी आए, उनले पहिले नै मियामी डाडे कलेजको कक्षामा भर्नाको कदम चालिसकेका थिए। उनले मियामी बन्दरगाहमा एउटा नौकरी सर्विसिंग जहाजहरू पनि फेला पारेका थिए। यो कडा मेहनतको काम थियो, तर एन्टोनियोले मन पराए, र उनले पाएको सबै बदलावहरू लिए। उनले डाउनटाउन मियामीलाई जोसिलो भेट्टाए। उसले क्षेत्रमा यति धेरै समय खर्च गर्‍यो कि सामान्यतया केही घण्टा आराम गर्नका लागि घर यात्रा गर्नु उचित थिएन। यसको सट्टा, एन्टोनियोले आफ्नो अधिकांश समय घडीमा "चेजरज लज" मा गुजारा गर्दछन् जहाँ पोर्टमा काम गर्नेहरू काम गर्ने घण्टा बिचमा आराम गर्न सक्थे।
एन्टोनियोले आफ्नो प्रशिक्षकसँग साझा गरे कि लामो यात्राले उनलाई आफ्नै कन्डो वा पोर्ट नजिकैको घरको सपना देखेर छोडिदियो। उनले यो पनि साझा गरे कि घर जग्गाको बिक्रीमा उनीसँग रुचि छ। ऊ घर जग्गाजमिन बन्न र अर्को आय स्रोत थप्नको लागि सम्पत्ति भाडामा लिने विचारतिर आकर्षित भयो।
क्याटालिस्ट मियामीमा भएको पहिलो कुराकानी पछि, वित्तीय कोचले एन्टोनियोलाई उत्प्रेरित गरे किन्टालिष्टको नि: शुल्क वित्तीय कोचिंग कार्यक्रममा भर्ना हुनको लागि आफ्नो लक्ष्य तिर। कोचले सुझाव दिए कि उनको पहिलो चरणहरू आफ्नो बजेट समीक्षा गरी क्रेडिट स्कोर मर्मत गर्न सुरु हुनुपर्छ।
एक संस्थाको रूपमा उत्प्रेरक मियामीको शक्तिहरू मध्ये एक यसले प्रदान गर्ने सेवाहरूको दायरा हो। एन्टोनियोले धेरैको फाइदा उठाए।
कार्यक्रममा सामेल भएपछि एन्टोनियोले आफ्नो बजेट सँधारे शुरू गरे। उनले आफ्नो आय र खर्चको आकलन गर्न र को लागी लक्ष्यहरू सेट गर्न कोचसँग काम गरे।
अर्को, उनले क्याटलिस्ट मियामीको स्वास्थ्य टीमसँग काम गरे जसले स्वास्थ्य बीमा योजनामा भर्ना हुन।
अन्तमा, उसले आफ्नो क्रेडिट स्कोरमा बदल्यो, जुन हालका वर्षहरूमा पीडित थियो। एन्टोनियो क्रेडिट स्कोर को लागी आफ्नो स्कोर सुधार गर्न को लागी तरिकाहरु को लागी साइन अप गर्नुभयो। कोचको सिफारिश मध्ये एक सामिल हुनु थियो Lending Circles, एमएएफको शून्य ब्याज loanण कार्यक्रम साबित भयो कि व्यक्तिहरू उनीहरूको क्रेडिट स्कोरहरू स्थापना गर्न र बढाउन मद्दत गर्न।
क्याटालिस्ट मियामीका स्टाफसँग काम गरिसकेपछि एन्टोनियो आफूले आफू र आफ्नो परिवारको लागि चाहेको आर्थिक स्थायित्वको नजिक गए। उसले सम्पूर्ण $3,000 भुक्तान गरिसकेको छ उसले पहिले क्रेडिट कार्ड debtणमा थियो। ऊसँग एक मासिक बचत दिनचर्या छ, र उसको बढ्दो बचत खातामा $500 छ। र उसको क्रेडिट स्कोर?
एन्टोनियो आफ्नो वर्तमान क्रेडिट स्कोर साझा गर्व छ: एक प्रभावशाली 3030०।
एन्टोनियो अब कसरी आफ्नो बलियो क्रेडिट स्कोर कायम राख्न र यसलाई निर्माण गर्न जारी राख्नको लागि आत्मविश्वास महसुस गर्छन, तर उसको स्वस्थ क्रेडिट प्रोफाइलले कम ब्याज दरको साथ कार किन्न मद्दत पुर्‍यायो, जुन उसले पहिले योग्य नगरेको हो।
उनी कार्यक्रममा आफ्नो अनुभवबाट सन्तुष्ट भए कि उसले साथी र सहयोगीहरूलाई परिणामको प्रशंसा गर्न थाले।
नतिजाको रूपमा, उनका चार साथीहरू पछि क्याटालिस्ट मियामीको वित्तीय कोचिंग कार्यक्रममा सामेल भए र Lending Circles कार्यक्रममा भर्ना भए!
एन्टोनियो आफूले हासिल गरेको सबैमा गर्व छ। र उसलाई अब थाहा छ कि उसको व्यक्तिगत र व्यावसायिक सपनाहरू उसको पहुँच भित्र छन्।
लेखक को बारेमा: भान जोनसन क्याटालिस्ट मियामीको कम्युनिटी वेल्थ मैनेजर हुन्, जसले मियामी, एफएलमा वित्तीय कोचिंग, शिक्षा र स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रदान गर्दछ। उनले फ्लोरिडा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेका छन्।